पीपुल्स च्वाइसमा परेकी प्रतिभालाई सहयोग गर्नेको ओइरो, ४ लाख ५० हजार नाग्यो
२०७३ श्रावण ५ बुधबार, काठमाडौं । पल्सर स्पोर्टस अवार्ड अन्र्तगतको पीपुल्स च्वाइस विधाको मनोनयनमा परेकी भलिबल खेलाडी प्रतिभा मालीलाई जिताउन विदेशमा बस्ने खेलाडी तथा सुभचिन्तक, नेपाल भलिबल संघ, भलिबल प्रेमीको सहयोगबाट सकलन रकम ४ लाख ५० हजार नाघेको छ । अमेरीकामा बसोबास गर्ने भलिबलका राष्ट्रिय खेलाडीद्धय राम श्रेष्ठ र रमिला तण्डुकारको पहलमा रोमन श्रेष्ठ, कैलास भट्लगायतले अमेरिकाबाट १ लाख ४० हजार ५ सय ५५ रुपैंया पठाएका छन् । त्यस्तै अष्ट्रेलियाबाट भलिबलका ... बाँकी अंश»
म्यानचेष्टर युनाइटेड चीनमा, थाक्दैनन् मौरिन्हो
२०७३ श्रावण ५ बुधबार, काठमाडौं। इङ्लिश प्रिमियर क्लव म्यानचेष्टर युनाइटेडका नयाँ प्रशिक्षक जोजे मौरिन्हो नौलो प्रयोग गर्न थाक्दैनन्। त्यसैले त उनको ज्यानलाई कहिल्यै बुढेसकाल लाग्दैनजस्तो लाग्छ। ... बाँकी अंश»
२०७३ श्रावण ४ मंगलबार, काठमाडौं। मेरिलीबोन क्रिकेट क्लब (एमसीसी) बिरुद्धको खेलमा नेपाली टोली ४१ रनले बिजय भएको छ। २१८ रनको बिजय लक्ष्य पच्छ्याएको एमसीसी ४७.२ ओभरमा १७६ रनमा अलआउट भएपछि नेपालले खेल ४१ रनले जितेको हो।नेपालकालागि सागर पुनले ३ विकेट लिएका थिए। एमसीसीका अडेरले १०० रन बनाएका थिए। विश्वकै पुरानो मेरिलेबोन क्रिकेट क्लब एमसीसीविरुद्धको मैत्रीपूर्ण खेलमा नेपाली क्रिकेट टोलीले २१८ रनको चुनौती पेश गरेको थियो । निर्धारित ५० ओभरको खेलमा नेपालल ... बाँकी अंश»
एमसीसीसामु नेपालको २ सय १८ रनको चुनौती
२०७३ श्रावण ४ मंगलबार, काठमाडौं । विश्वकै पुरानो मेरिलेबोन क्रिकेट क्लब एमसीसीविरुद्धको मैत्रीपूर्ण खेलमा नेपाली क्रिकेट टोलीले रनको चुनौती पेश गरेको छ । निर्धारित ५० ओभरको खेलमा नेपालले ८ विकेट गुमाउँदै २ सय १७ रन बनायो । टस जितेर पहिले व्याटिङ गरेको नेपालका लागि ओपनर एवं उपकप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लले ३९ रन बनाए । यस्तै, कप्तान पारस खड्काले चोथो विकेटका लागि २८ बलमा ३० रन बनाए । अर्का ओपनर अनिल मण्डललाई सस्तैमा गुमाएको नेपालका लागि शरद भेषावकरले २७, सा ... बाँकी अंश»
नेपालको २ सय १८ रनको चुनौती, जवाफी व्याटिङमा एमसीसी
२०७३ श्रावण ४ मंगलबार, काठमाडौं । विश्वकै पुरानो मेरिलेबोन क्रिकेट क्लब एमसीसीविरुद्धको मैत्रीपूर्ण खेलमा नेपाली क्रिकेट टोलीले रनको चुनौती पेश गरेको छ । निर्धारित ५० ओभरको खेलमा नेपालले ८ विकेट गुमाउँदै २ सय १७ रन बनायो । टस जितेर पहिले व्याटिङ गरेको नेपालका लागि ओपनर एवं उपकप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लले ३९ रन बनाए । यस्तै, कप्तान पारस खड्काले चोथो विकेटका लागि २८ बलमा ३० रन बनाए । अर्का ओपनर अनिल मण्डललाई सस्तैमा गुमाएको नेपालका लागि शरद भेषावकरले २७, स ... बाँकी अंश»
भता-भुङ्ग भएको महिला क्रिकेट टिम गाँस्दै राखेप
२०७३ श्रावण ३ सोमबार, काठमाडौं । नेपाल क्रिकेट संघ क्यान आइसीसीको निलम्बनमा परेपछि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् राखेपले आफै क्रिकेट प्रतियोगिता गर्न थालेको छ । आइसीसीले क्यानमा सरकारी हस्तक्षेप भएको भन्दै क्यानलाई निलम्बन गरेको जानकारी गराएको थियो । अहिले घरेलु प्रतियोगिता सरकारले आफै गर्न थालेको छ । ‘आइसीसी महिला विश्व कप छनोट–एसिया २०१६ हङकङ’का लागि राखेपले आगमी शनिबारबाट सिनियर राष्ट्रिय महिला टिम छनोट प्रतियोगिता गर्न लागेको छ । त्रिवि अन्तर् ... बाँकी अंश»
इङ्ल्याण्डविरुद्ध पाकिस्तानको शानदार जित, घरमै इङ्ल्याण्डलाई सकस
२०७३ श्रावण ३ सोमबार, लर्डस् । इङ्ल्याण्डविरुद्धको पहिलो टेष्ट क्रिकेटमा पाकिस्तान ७५ रनले पराजित भएको छ । २८३ रनको चुनौती पछ्याउने क्रममा इङ्ल्याण्ड २०७ रनमै समेटियो । जोनी बेयरस्टले सर्वाधिक ४८ रन जोडेको इङ्लिश टोलीलाई ध्वस्त पार्न यासिर शाहले ६९ रन खर्चेर ४ विकेट लिए । त्यस्तै राहत अलीले ३ तथा मोहम्मद अमिरले २ विकेट लिए । यसअघि पहिलो इनिङ्मा सबैभन्दा बुढा कप्तान मिसबाह उल हकले ११४ रनको कीर्तिमानी (सबैभन्दा बुढो कप्तानले सतक हिर्काएको) सतकसंगै पाकिस्त ... बाँकी अंश»
बेलायतमा नेपाली क्रिकेटको सनसनी, मंगलबार लर्डस्मा एमसीसीसंग भेट
२०७३ श्रावण ३ सोमबार, काठमाडौं । बेलायत भ्रमणमा रहेको नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीले मंगलबार अन्तिम खेलमा लर्ड्स मैदानमा विश्वकै पुरानो मेरिलिबोन क्रिकेट क्लब एमसीसीसँग खेल्दैछ । यो खेलसंगै नेपालको बेलायत भ्रमण पनि टुङ्गिने छ । पहिलो पटक बेलायत जाने अवसर पाएको नेपालले लर्डस्मा खेल्न पाउनु आफैमा पनि एउटा इतिहास हो । नेदरल्याण्ड्सविरुद्ध विश्व क्रिकेट लिग खेल्नका लागि अभ्यासमा रहेको नेपालले बेलायतमा भने सनसनीपूर्ण प्रदर्शन गरेको छ । नेपालले अहिलेसम्म खेल ... बाँकी अंश»
खेलकुद परिषदको बोर्ड बैठकमा मन्त्री मण्डलको घृणित हर्कत
२०७३ श्रावण ३ सोमबार, काठमाडौंं । नेपाली खेलकुदको अहिलेको पारा हेर्दा लाग्छ कि त राष्ट्रिय खेलकुद परिषद बनेको घाम ताप्नका लागि हो कि त ओत लिनका लागि हो । अर्थात् खेलकुद परिषद कर्मचारी र पदाधिकारीका लागि जाडोमा बाहिर आएर घाम ताप्ने फराकिलो स्थल हो भने बर्खामास पानी परेका बेला ओत लिन भित्र जाने ठाउँ हो । खेलकुद परिषद गएर अहिले हेर्ने हो भने त्यो भन्दा बढी केही उपलब्धी हासिल हुन्न । प्रसङ्ग हो साउन २ गते आइतबार बल्लतल्ल बसेको खेलकुद परिषदको १०६ औं बोर्ड बैठकको । मुस् ... बाँकी अंश»
सातौं राष्ट्रिय खेलकुद मंसिर ८ देखि १५ सम्म पूर्वाञ्चलमा
२०७३ श्रावण २ आइतबार, काठमाडौंं । दुई पटक मिति घोषणा भएपनि बजेटको समस्या र मधेश आन्दोलनका कारण स्थगित भएको सातौं राष्ट्रिय खेलकुदको नयाँ मिति तय भएको छ । सातदोबाटोस्थित अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद परिसरमा आइतबार बसेको राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) को १०६ औं बोर्ड बैठकले राष्ट्रिय खेलकुदको नयाँ मिति ताकेको हो । राखेप अध्यक्ष युवा तथा खेलकुद मन्त्री सत्यनारायण मण्डलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सातौं राष्ट्रिय खेलकुद पूर्वाञ्चलमा मंसिर ८ देखि १५ गतेसम्म गर् ... बाँकी अंश»
डाक्टरले खेलाडीको उपचार त राष्ट्रले गर्नु पर्ने हैन र ! भन्दा इन्द्र भक्कानिएर रोए
२०७३ श्रावण २ आइतबार, काठमाडौं । बक्सिङ खेलाडी इन्द्रबहादुर रानामगरलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी संघका अध्यक्ष दिपक बिष्टले ५० हजार सहयोग गरेका छन् । खेलाडी कल्याणकारी कोषबाट क्यान्सर पीडित इन्द्रलाई आइतबार हरिसिद्धि स्थित नेपाल क्यान्सर हस्पिटलमा सहयोग स्वरुप ५० हजारको चेक अध्यक्ष बिष्टले हस्तान्तरण गरे । सहयोगका क्रममा उनले भने – ‘आफ्नो जीवनको अमुल्य समय राष्ट्रका लागि समर्पित गरेका खेलाडीहरुको उपचारका लागि राष्ट्रले जिम्मेवारी लि ... बाँकी अंश»
स्पोर्ट्स अवार्डलाई रुस्लान फुटबलको साथ
२०७३ श्रावण २ आइतबार, काठमाडौं। नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्चले आयोजन गर्ने पल्सर स्पोर्ट्स अवार्ड २०७२ मा ‘रुस्लान हन्डेड पर्सेन्ट प्योर फुटबल’ले सह प्रयोजनको रुपमा साथ दिएको छ। प्रायोजन सम्झौता आइतबार भएको छ। सम्झौता पत्रमा नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्चका अध्यक्ष महेश आचार्य र जावलाखेल ग्रुप अफ इन्डस्ट्रिजका संस्थापक अध्यक्ष विजयकुमार शाहले हस्ताक्षर गरे। प्रायोजन सम्झौता तीन बर्षको रहेको छ । प्रायोजन बार्षिक चार लाख रुपैयाको रहेको छ। ‘सरकारबाट हुनुपर ... बाँकी अंश»
मौरिन्हो एक घाइते बाघ, म्यानचेष्टरको विजयी सुरुवात
२०७३ श्रावण २ आइतबार, काठमाडौं । इङ्लिश प्रिमियर लिग फुटबल सुरु हुन एक महिना पनि बाँकी छैन । त्यसका लागि अभ्यास भने सुरु भइसकेको छ । यसपटक लिगका चर्चित म्यानेजार हुन सक्छन् –जोजे मौरिन्हो । पछिल्ला केही उपाधि जित्न नसकेको लिगको इतिहासको सफल क्लव म्यानचेष्टर युनाइटेडको म्यानेजरका रुपमा देखिएका मौरिन्होले टिमलाई कता लैजालान् भन्ने चासो छ । गत सिजनमा चेल्सीको उपाधि रक्षा गर्नु त कता हो चेल्सीको इतिहासमै अहिलेसम्मको खराव स्थितिमा झार्न अहम् भूमिका खेलेस ... बाँकी अंश»
२०७३ श्रावण १ शनिबार, काठमाडौँ । अभ्यास खेलका लागि बेलायत भ्रमणमा रहेको नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीले क्लब क्रिकेट कन्फ्रेन्सलाई (सिसिसी) चार विकेटले हराएको छ । बेलायतको लण्डनस्थित स्टानमोर सिसी मैदानमा गएराति भएको खेलमा घरेलु टोली सिसिसीलाई हराएपछि नेपालले लगातार तेस्रो जित हात पारेको हो । टस जितेर ब्याटिङ गरेको सिसिसीले निर्धारित ५० ओभरमा ७ विकेटको क्षतिमा २२६ रन बनाएको थियो । जवाफी ब्याटिङमा आएको नेपालले ४६.१ ओभरमा मात्र छ विकेट गुमाउँदै लक्ष्य भेटायो । ... बाँकी अंश»
मेसी, रोनाल्डो र नेमार जस्ता स्टारले खोजी–खोजी भेटेका बालक को हुन ?
२०७३ असार ३१ शुक्रबार, एजेन्सी । विश्वभरका करोडौं फुटबल प्रेमीको एउटै चाहाना हुन्छ आफ्नो मन पर्ने खेलाडीलाई भेट्ने । तर, सबैको हकमा यो सम्भव छैन । तर, एक त्यस्तो आश्चर्य रहयो की एक बालकलाई भेट्न सर्वाधिक सफल खेलाडीहरु खोज्दै पुगे । अहिले विश्व हल्लाएका सफल खेलाडीहरुले ती बालकलाई भेटेका छन् । १४ वर्षीय यी बालकले प्रत्येक पटक स्टार खेलाडीहरु सगँको भेट पछि फोटो खिच्दै आफ्नो सामाजिक संञ्जालमा राख्ने गरेका गरेका छन् । दुबईका १४ वर्षीय रशेद बेल्हसाले पहिलो पट ... बाँकी अंश»
बेलायत भ्रमणमा रहेको नेपाली क्रिकेटको लगातार दोस्रो जित
२०७३ असार ३१ शुक्रबार, लन्डन । बेलायत भ्रमणमा रहेको नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीले लगातार दोस्रो जित हासिल गरेको छ । लण्डनको इन्डियन जिमखानामा भएको खेलमा नेपालले जिमखाना क्रिकेट क्लवलाई २० रनले हरायो । यसअघि पहिलो खेलमा नेपालले स्थानीय फ्रि फोरेष्टर क्लबलाई १२९ रनले हराएको थियो । खेलमा पहिले ब्याटिङ्ग गरेको नेपालले निर्धारित २० ओभरमा ७ विकेट गुमाएर १६२ रन बनायो । सागर पुनले ५६ तथा ज्ञानेन्द्र मल्लले २० बलमा ३८ रनको योगदान दिए । राजु रिजालले ११ बलमा अविजि ... बाँकी अंश»
बार्सिलोना फर्कनु अघि मस्तीमा मेसी
२०७३ असार ३० बिहिबार, एजेन्सी। पूर्व अर्जेन्टाइनी फरवार्ड तथा बार्सिलोनाका स्टार स्ट्राइकर लियोनल मेसी आगामी ला लिगाको नयाँ सिजनको पूर्वसन्धा अगाडी आफ्नो परिवारसँग छुट्टी मनाउन स्पेनको सर्वाधिक चर्चित फोर्मन्टेरा टापु पुगे । उनले आफ्नो परिवारको साथमा खुसी मनाएका छन् । आफ्नी पत्नी एन्थोलेना, छोराहारु थिएगो तथा मोटासहित सो समुद्री तटमा उनी रमाइलो गरिरहेका देखिन्छन्। ... बाँकी अंश»
फिफा वरियतामा नेपाल ६ स्थान तल झर्‍याे
२०७३ असार ३० बिहिबार, काठमाडौं । विश्व फुटबल महासंघ फिफाले जारी गरेको जुलाई महिनाको फिफा विश्व वरियतामा नेपाल ६ स्थान तल झर्दै १ सय ८८ स्थानमा पुगेको छ । जारी महिनामा कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता तथा मैत्रीपूर्ण खेल नखेलेको नेपाल फिफा वरियतामा खस्किएको हो । दक्षिण एसियामा क्रमश भारत १ सय ५२, माल्दिभ्स १ सय ७४, बंङलादेश १ सय ८३, नेपाल १ सय ८८, भुटान १ सय ९२, श्रीलंका १ सय ९३ र पाकिस्तान १ सय ९४ स्थानमा रहेको छन् । अर्जेन्टिना १५ सय ८५ अंक सहित फिफा वरियताको शीर ... बाँकी अंश»
२०७३ असार ३० बिहिबार, काठमाडौँ । बेलायत भ्रमणमा रहेको नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीले स्थानीय क्लबसँग भएको पहिलो मैत्रीपूर्ण खेल जितेको छ । बुधबार भएको खेलमा लन्डनको क्लब फ्रि फोरेस्टरलाई १२९ रनको फराकिलो रनको अन्तरले हराउँदै आफ्नो अभ्यास सत्रमा सुखद सुरुवात गरेको हो । इन्डियन जिमखाना मैदानमा भएको खेलमा टस हारेर ब्याटिङ गरेकको नेपालले निर्धारित ४० ओभर खेल्दै नौ विकेटको क्षतिमा २३५ रनको विशाल लक्ष्य खडा गर्‍यो । नेपालको सहज जितका लागि उपकप्तान ज्ञा ... बाँकी अंश»
पारस खड्काले दिए सचिन तेण्डुलकरलाई नेपाली जर्सी उपहार !
२०७३ असार ३० बिहिबार, काठमाडौं। विश्व क्रिकेट लिगका लागि नेदरल्याण्ड्स विरुद्ध खेल्नुअघिको महत्वपूर्ण बेलायत टुरमा रहेको नेपाली टोलिका कप्तान पारस खड्काले भारतीय क्रिकेट लेजेण्ड सचिन तेन्दुलकरलाई नेपाली क्रिकेट टोलीको जर्सी उपहारका रुपमा दिएका छन्। ईङल्याण्डमा रहेको नेपाली टोलीका कप्तान पारसले सचिनसँगको फोटो ट्विट गरेका छन्। उनले आफ्नो ट्विटमा प्रशान्त कुवँरको पनि प्रशंसा गरेका छन्। कुवँरले नै सचिनसँग भेट गर्ने चाँजो पाँजो मिलाएका अुन्। पारसले ट्विट ... बाँकी अंश»